Kenya oo sheegtay in wada hadal ku saabsan muranka badda uu u socdo Somalia – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Monica Juma ayaa shaaca ka qaaday in wada hadal ku saabsan muranka xuduuda Badda uu u socdo Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo dacwada ku saabsan muranka xuduudka Badda ee labada dal uu xilligan yaallo Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ.
Wasiirada ayaa sheegtay inuu jiray heshiis is faham oo u dhaxeeyay iyaga iyo Soomaaliya, balse arrinta muranka badda markii dambe Maxkamad ay tagtay, waxaana horay u jiray in labada dal ay kala doortaan in Maxkamad ay ku kala baxaan iyo inay wada hadal ka galaan, hase ahaatee dowladdii hore ee uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkeysatay in Maxkamad lagu kala baxo.
Arrintan ayaa shaki la’aan dharbaaxo ku noqon karta doonta dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo oo aan ka hadlin arrinta muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya inta ay xafiiska timid.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xilligan ah mid aad u wanaagsan, waxaana dadka odorasa siyaasadda ay ku tilmaamaan inuu yahay, xilligii u fiicnaa ee sanadahan dambe.
Roobab khasaare geystay oo ka da’ay deegaano ka tirsan Puntland iyo Somaliland